Portuguese Pamhepo Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(352 mavhoti, avhareji: 5.00 kubva 5)
Loading ...Kubva munaJanuary 2018, mhando dzose dzebhejeni dziri pamutemo muPortugal. Gambling Regulator Portugal - Serviço Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), ari kutarisira nzvimbo yose yekubhejera munyika, kusanganisira nzvimbo-based casinos uye kubhejera paIndaneti. Zvekare cherekedza vashanyi kunzvimbo yedu yepamhepo yekubhejera dhairekitori iyo inonyanya kufarirwa kubhejera munyika, ehe, irotari. Zvakare kunakidzwa nekubudirira kukuru uye mitambo kubheja.
MuPortugal, ese marudzi ekubhejera epamhepo ari pamutemo. Mitemo yechiPutukezi pamhepo kubhejera kunoenderana zvakanyanya nemitemo yeEurope, ichibvuma musika wakasununguka nechipiriso chakasiyana chekubheja Pamhepo kasino mitambo, online poker uye online mitambo kubheja inozivikanwa kwazvo pakati pevagari vemunyika.
Rwokutanga rweZV 10 Portuguese Online Casino Sites
Sites online casinos inobvuma vatambi vanobva kuPortugal
Ona runyorwa rwepamhepo kasino nzvimbo dzinogamuchira vatambi vanobva kuPortugal, uye nekupa mhando dzemhando yepamusoro uye dzakachengeteka. Pano iwe unowana zvakasiyana siyana zvevaraidzo kubva kune slot michina kune kasino mitambo inorarama kubva kune vakakurumbira software vatengesi seNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nevamwe vazhinji.
Iwe unogonawo kuverenga kuongorora kwedu kwepaIndaneti nzvimbo dzepaIndaneti, kuti uzive zvakanakisa kutengeswa kwepaIndaneti, mabhonasi uye maikwereti ekubhadhara anowanikwa kune vatambi vanobva kuPortugal.
Portugal - igungwa uye nhabvu, waini nemamiriro ekunze akanaka. Vanouya pano kuzoshandisa zororo rakakura, asi zvakare kuzonyura mugomba rakadzika remafaro mune imwe yemakasino makuru muEurope. Yake inotevera inomira CasinoToplists inogadzira muLisbon yekare uye yakanaka - guta guru rePortugal.
Nyaya yenyaya yacho:
Portugal - uko kune zvakare zvishoma nhoroondo;
kunze kwemaguta makuru;
Online Casino Kubva 2003 kusvika 2012 kambani yekambani yeSanta Casa de Misericordia de Lisboa;
kubva ku2012 kusvika kune dzimwe nyika.
Zvitsva zvishanu zveLisbon guta guru rePortugal rine adresi;
Chokwadi chinofadza pamusoro pePortugal uye vagari vemo.
Nzvimbo yePortugal uye nhepfenyuro shoma yemamiriro ezvinhu
Nenzira yekudzidzira kubhejera munyika inotanga nechitauriro kuhurumende, chimiro chayo uye zvinhu.
Kunyangwe vanhu vari muchikamu ichi cheEurope, nenzira, yekumadokero, vaigara kare nguva yedu isati yasvika, hwaro hwakagadzwa nenyika yePutukezi muzana XI century. Kuti izvi zviitike, vagari vekumadokero kweIberian Peninsula vakaona simba reLusitanian, Roma, Visigoths nemaArabu. Kubva kudunhu reSpain rakapamhamara rakaparadzaniswa nyika - Portugal, inhengo nhasi kune EU uye Schengen zone.
Nhasi, Portugal inhengo yeparamende iyo mavanogara vangangoita mamirioni gumi nevanhu. Heano mitauro miviri yepamutemo - Portuguese uye miransky. Mutungamiri wenyika mutungamiriri wenyika, muna 11 chinzvimbo chinotora Aníbal Cavaco Silva.
Continental Portugal yakakamurwa kuita matunhu gumi nemasere, uye nyika iri yenharaunda mbiri dzinozvimiririra - Madeira neAzores.
Casino uye kubheja muPortugal
Kubhejera vanhu vane ruzivo rwakanyanya ndevokuPortugal, nokuti casino ipapo, vazhinji vavo, vakashongedzwa zvakanaka uye vanopa mikana yakawanda yekuseka.
Semunyika dzese dzeEU, zvese zviitiko zvekubheja zvinotarisirwa nehurumende uye zvinodzorwa zvakanyanya. Izvi zvinosanganisira kwete chete kuvhura uye kugadzirisa kwecasino, asi zvese kubhejera. Vemunharaunda vanoda kukwidziridza mwero weadrenaline muropa, ivo vari kucasino zvakanyanya sevashanyi. Varidzi vecasino nekutya vanoenderana nevashanyi, nekuti kunyangwe paine mutero unorema, vanowana kudzoka kwakanakisa.
Ndichiri kutamba muPortugal, zvaitaridzika, kubva pakutanga kwenguva, masangano akasarudzika akatanga kuvhura chete muzana ramakore reXIX. Iyo yekutanga kasino yakavhurwa muFuzheyra da Foz - guta rinoyevedza uye rinoyevedza. Asi iyo chaiyo yekubhejera yakashanda zvakatsetseka kudzamara kuchinja kwesimba, makore mashoma chete.
Simba idzva pamusoro penguva rakaratidza kuvimbika kwakaita kuti poker, roulette uye slot michina iwanikwe, kwese kwese. Kwakatemerwa kurambidzwa kwenzvimbo kurongeka hakuna kuiswa, saka makasino akatanga kuvhura mumaguta akasiyana. Wekutanga akatora batoni muEspinho nePovoa de Varzim.
Apo simba zvakare uye rakatsiviwa pachigaro chekutonga rakava António Salazar akawana 2 dzimwe dzimba dzokubhejera. Panguva ino, iko iko kweakanyanya kufunga. Imwe kasino inomhanya pane inoyevedza Madeira, imwe - muEstoril, iri muLisbon. Kubvira pakati peguta guru kusvika kuchikoro chemazuva ano chechina 15 km , kuitira kuti vagari nevashanyi vagone kufarira guta guru chero nguva. Nhandare yepasi rose inongovawo 15 km chete .
Casino yakadaidzwa nezita reruwa - ” Estoril “. Nzvimbo iri nyore yakamuunzira hafu yekubudirira. Nzvimbo yacho pachayo inonakidza kwazvo sezvo iri pamhenderekedzo yegungwa reCascais. Territory yakashongedzwa uye yakasarudzika, uye ine mutambo uye wakasununguka mutambo.
Nenzira, "Estoril" kasino hombe haisi muPortugal chete asiwo muEurope. VaFond bond vanozofarira kuziva kuti iyi ndeimwe yenzvimbo dzinodikanwa dzeIan Fleming. Akakakavara kuti zano rake rekunyora inoverengeka "Casino Royale" rakazvarwa pano. Saka kuuya kweJames Bond akateedzana evasori uye nezvose zvatakakweretwa kumakasino ePortugal.
"Estoril" ine yayo ngarava, pamwe neartari gallery. Panharaunda yekasino gore rega mutambo wefirimu unoitwa munaNovember. Gore rese kutenderera kune nyeredzi dzepasi rose nhabvu, inoita jazz konzati, mimhanzi mhenyu uye kuimba mumitauro yakawanda. Pano panoitwa mitambo ye poker.
Mitambo yeIndaneti muPortugal
Kasino chaiye muPortugal uye pane imwe sarudzo. Kubva muna2003 kusvika 2012 chigaro ichi chaive chekambani yemuno chete Santa Casa de Misericordia de Lisboa.
Asi mugore ra2012, hurumende yakavhura muganho kune vanoshanda kunze kwenyika. Pakazosvika 2014, rezinesi rakatambira mhando zhinji dzinozivikanwa, saka unogona kutamba zviri pamutemo usinga siya nekuda kwekombuta, laptop kana nhare mbozha.
Zvitsva zve Lisbon
Nhare yeSt . Kero: Rua de Santa Cruz do Castelo, 1100-129 Lisboa. Ino inzvimbo inozivikanwa yeLisbon, inochengetedzwa nhare, inoonekwa kubva chero panhongonya yeguta guru. Zvinhu zvekare zvemasvingo zvakavakwa muzana ramakore VI. Kusvikira muzana ramakore reXII, kwaive iko kwekugara kwemaMoor emir.
The Calouste Gulbenkian Museum . Kero: Av. de Berna 45A, 1067-001 Lisboa. Yakavanzika Unganidzo yemafuta magnate yeArmenian mavambo, akatakurwa kuenda kuHurumende, Bole ine zvuru zvitanhatu zvezvinhu zveunyanzvi. Kuwedzera kuunganidzwa kwekupenda ndeye antique fenicha, zvifananidzo, zvishongo, antique keramiki uye mabasa eanoshandiswa art.
Lisbon Oceanarium . Kero: Esplanada Dom Carlos I, s / n, 1990-005 Lisboa. Muchivakwa chepakutanga, chakafanana nemutakuri pamusuwo, unogona kuona anopfuura mazana mana emarudzi evagari vemo.
Santa Justa Lift . Kero: Rua do Ouro, 1150-060 Lisboa. Iyi erevheta inosimudza, inomhanya kubvira 1902, iyo inokutendera iwe kusimuka uye munzvimbo dzakadzika Baishi mudenga Chiado.
Tower of Belém . Kero: Avenida Brasília, 1400-038 Lisboa. Fort XVI century, yakachengetedzwa zvakakwana uye chimwe chezvivakwa zvinodakadza zveguta guru. Iyo shongwe yakamira pachitsuwa cherwizi cheTagus mukuremekedza kuvhurwa kwenzira inoenda India neVasco da Gama.
Chokwadi chinofadza pamusoro pePortugal uye chiPutukezi
Portuguese matriarchal family.
Chitendero chikuru - Katurike (96%).
Portuguese - vanofarira nhabvu vateveri, nhabvu kirabhu mumaguta ese, kunyangwe mune diki.
Mutauro wechiPutukezi ane chiremera chepamutemo munyika dze9.
MuPortugal, pane mitemo yakasimba yemugwagwa.
Nyika yacho ine yepamusoro yepamusoro yekurapa.
ChiPutukezi - vanhu vanoseka uye vanofara, vanofarira kuseka uye majee, asi vasina hunhu. Manyepo eChirungu asinganetsi haakudzwe.
90% yevagari vePortugal ndivo chiPutukezi.
Zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevanhu vanogara pamahombekombe.
Lisbon 2 miriyoni hupenyu. Kana huwandu hwenyika hwamamiriyoni gumi nerimwe.
Mazita anozivikanwa kwazvo muPortugal - Joao Maria evarume nevakadzi.
Inopfuura hafu yevanhu ndeimwe yezita re7: Silva Ferreira, Santos Oliveira, Pereira, Rodriguez Costa.
Zita rechiPutukezi rine mazita e4: 1 uye 2 mazita evanhu, zita raamai nababa.
Portugal iri pamepu yeEurope
0.1 Kutambabhejera muPortugal
0.2 Rwokutanga rweZV 10 Portuguese Online Casino Sites
2.1 Sites online casinos inobvuma vatambi vanobva kuPortugal
3 Kubhejera muPortugal
3.0.1 Nzvimbo yePortugal uye nhepfenyuro shoma yemamiriro ezvinhu
3.1 Casino uye kubheja muPortugal
3.2 Mitambo yeIndaneti muPortugal
3.2.1 Zvitsva zve Lisbon
3.2.2 Chokwadi chinofadza pamusoro pePortugal uye chiPutukezi
3.2.3 Portugal iri pamepu yeEurope